Caddayn cilmi ah oo ujeeddadu wax ka beddeleyso arrinta - Afrikhepri Fondation
Caddayn cilmi ah oo ujeeddadu isbeddelayso
LFiisikiska maanta waxaay ilaaween waxwalba oo ku saabsan saameynta goobjoogaha. Waxay kaliya isla'egyada ay xarrago leh iyo filan helitaanka qaar ka mid ah dhinacyada dheeraad ah oo ka baxsan kuwa in aadanuhu Arkaa, ama Soon ee aragti midaysan wax kasta, taas oo ay rajaynayaan ku guulaysan doonaan ereygu wuxuu ahaa ee kuwan oo dhan natiijada hor imanayaan hal aragti dhexe.
Waxaa jira in ku dhow soddon sannadood, halka inta kale ee bulshada sayniska mashiin sii shuqulkiisa aan waxgarashada lahayn, koox yar oo saynisyahano hormuudka jaamacadaha haybadda leh adduunka oo hakad in la baaro saameynta metaphysical Tarjumaadda Kobanheegan iyo saamaynta kormeeraha.
Haddii arrintu tahay mid la isku mari karo, iyo haddii uu miyir qabo taas oo ka dhigaysa qaabab noocaas ah, markaa waxay u muuqataa in miyirku uu sidoo kale awood u leeyahay inuu keeno waxyaabo uu ku qaado jihada gaarka ah.
Baadhitaankoodu wuxuu ku dhammaaday su'aal fudud:
Haddii aad u hoggaansamayso dareenka mid ka mid ah wax isbeddelaya arrinta jireed, maxay noqon kartaa saameynta ujeedada? Maxaa dhacaya haddii aan si ula kac ah isku dayno inaan isbedelno? Ka qaybqaadashadayada oo ah kormeerayaal caalami ah, waxaanan laga yaabaa inaanay ahayn uun abuurayaasha, laakiin sidoo kale saameynaya.
Cilmi-baadhayaashani waxay qaadeen in ay sameeyaan oo tijaabiyaan tijaabooyin si ay u tijaabiyaan waxa ay ugu yeeraan "saameyn fog oo maskaxeed oo toos ah" ama "psychokinesis," ama, si ka fudud, "ujeeddada" ama xataa "ujeeddo".
Marka la eego qeexitaanka asalka ah ee ujeedada, dambe ayaa lagu tilmaamayaa sida "Qorshe qunyar-socod ah oo lagu fulinayo ficil, taasoo horseedi doonta natiijada la rabayWaxay ka duwan tahay rabitaan, taas oo macnaheedu yahay in aanu rabno natiijo gaar ah, iyada oo aan la samayn qorshe sax ah oo lagu gaari karo.
Ujeedadu waxay udub-dhexaad u tahay ficilada qofka aadka u sheega; waxay u baahan tahay nooc ka mid ah sababaynta, iyo sidoo kale ballanqaad ah in ay sameeyaan wax sax ah. Ujeedadu waxay tusineysaa in ay jirto ujeedo iyo in aan fahamno baahida qorshe hawleed si loo gaaro natiijada loogu talagalay.
Marilyn Schlitz, madaxweyne ku-xigeenka cilmi-baarista iyo waxbarashada ee machadka cilmiga sayniska, iyo mid ka mid ah cilmi-baadhayaasha ku lug leh baadhitaankii koowaad ee abaarta fog, waxay ku qeexday rabitaanka "mashaariicda miyir-qabka, si ula-kac ah oo macquul ah, si loo gaaro himilad ama natiijo ". Si wax looga qabto arimaha jireed, waxay aaminsan yihiin, tijaabiyayaashu waa inay noqdaan kuwo aad u dhiirigeliya, iyo fekerkiisa, oo xoogga saaraya.
In taxane ah oo tijaabo cajiib ah, saynisyahano ku muujiyeen in qaar ka mid ah fikirrada lagu faray u keeni karaa saamayn ku jidhka, alaabta walax oo ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee dadkuba ku nool, ka noolaha unicellular in aadanuhu.
Laba ka mid ah tirooyinka ugu muhiimsan ee koox hoosaadka this yar ahaayeen Robert Jahn, Hormood ayuuna hore ee shaybaarka ee kuliyadda injineernimada Princeton Engineering cillado Research Lab (pear) Jaamacadda Princeton, iyo saaxiibkii Brenda Dunne, kuwaas oo wada abuuray barnaamij cilmi-baaris oo lagu saleeyay sayniska dhawaaqa.
Waayo, shan iyo labaatan sannadood, Jahn iyo Dunne madax waxa noqday dadaal weyn oo caalami ah si loo loogu yeero "psychokinesis micro" ama saamaynta maan on matoorrada lambarka aan sugnay in ay maamulaan ee elektaroonik ah oo u dhigma dariiqa lacagta ah.
Macluumaadka ay soo saaraan mishiinnadan (batariyada iyo wejiyada kombiyuutarka) ayaa lagu xakameeyay naxdinta iyo natiijooyinka diidmada oo isbeddel ah. Maaddaama hawshooda ay gebi ahaanba kala duwan tahay, waxay soo saareen tiro ama tiro yar oo isku mid ah oo isku mid ah iyo wajiyo, sida waafaqsan sharciyada kala duwanaanshaha.
Nidaamka ugu caansan ee tijaabooyinka leh koronto-dhaliyayaashu waxay ahayd laba sawir oo soo jiidasho ah oo laga soo qaaday shaashadda kumbuyuutarka - tusaale ahaan, koofiyadaha iyo Hindida.
Ka qaybgalayaasha in waxbarashada, kuwaas oo la dhigay ka hor kombiyuutarada, iyo mishiino si ay u la weydiiyey in ay isku dayaan in ay saameyn ku in ay sida caadiga ah la siiyo mid ka mid ah laba images - odhan Cowboys badan - iyo in ay diiradda saaraan fikirradooda si si ay u helaan sawirro badan oo Indiya ah, ka dibna waxay isku dayeen inayan saameyn ku yeelan makiinadahaas.
Ka dib markii in ka badan laba iyo bar milyan oo tijaabooyin tijaabo ah, Jahn iyo Dunne si xushmad leh ayey u muujiyeen ujeedada aadanaha ayaa saameyn ku yeelan karta aaladaha elektaroonigga ah ee jihada lagu tilmaamay, natiijooyinkoodana waxaa si madax bannaani ah u soo saaray cilmi baarayaasha kale ee 68.
Inkasta oo shaybaarka PEAR uu diiradda saarey baadhitaankiisa ku saabsan saamaynta maskaxda ku haysa geedi socodka iyo walxaha unugyada, aqoonyahanno badan ayaa isku dayay inay saameyn ku yeeshaan ujeedada aadanaha ee ku saabsan waxyaabaha nool.
Inta badan ogaanshaha ugu horreysay ee miyir-qabka waxay dhaceen wax ka badan soddon sano ka hor. Natiijooyin cusub oo dhowaan ah ee fiyuuska dhajiska iyo sidoo kale dhowr shaybaar oo dunida ku yaalla waxay bixiyaan jawaabaha qaar ka mid ah su'aalahan. Waxay bixiyaan caddeyn ah in adduunkeena uu yahay mid aad u adag oo u furfuran si joogto ah oo saameyn leh.
Cilmi-baaristii dhawayd waxay muujinaysaa in waxyaabaha nooluhu si joogto ah u gudbiyaan oo ay helaan tamar qiyaas leh.
Moodooyinka cusub ee miyir-qabka waxay u soo bandhigaan sida urur ahaan awood u leh inay ku xayiraan dhammaan noocyada xadka jireed. Ujeedadu waxay u muuqataa inay tahay wax la mid ah fargeeto foori ah, samaynta fargeeto farabadan ee waxyaabaha kale ee caalamku ku dhawaaqo isku mid ah.
Daraasadihii ugu dambeeyey ee saamaynta maskaxdu waxay u muuqdaan inay muujinayaan in ujeedadu leedahay saameyn isbedel ah iyadoo ku xiran hadba xaaladda gobolka, iyo sidoo kale marka uu fikradiisa iyo fikradiisa been.
Ujeedada ayaa mar horeba loo adeegsaday aagag badan, oo ay ku jiraan cudurada daaweynta, wax ka beddelidda nidaamyada jirka iyo saameynta saameynta. Ma aha hadiyad gaar ah laakiin xirfad loo barto oo si fudud loo baro.
Xaqiiqdii, waxaynu dhamaanteen u adeegsanay rabitaanno dhinacyo badan oo nolol maalmeedkeena ah.
Dhammaan cilmi-baarista ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in awoodda ujeedadu waxay ku sii badato iyadoo la eegayo tirada dadka ee isla markaaba ka fikiraya isla wixii ....
category BARNAAMIJKA IYO MYSTIA
Boqorad Khalifa, Boqortooyadii madoow ee xukuntay boqortooyada Kaliforniya kahor qarnigii 15aad